Palladium: Ka qiimo badan dahabka. Waa maxay palladium maxaase ugu qaalisan | Maaliyadda Dhaqaalaha
Casudi casals | 09/08/2021 19:33 | Dhaqaalaha guud
Si ka duwan sida dad badani aaminsan yihiin, dahabku ma aha biraha ugu qaalisan suuqa, ugu yaraan had iyo jeer ma aha. Xaqiiqdii, palladium, oo ka tirsan kooxda platinum, wuxuu dhaafay qiimaha dahabka 2002 iyo mar kale 2019. Laakiin maxaa ka dhigaya palladium ka qiimo badan dahabka?
Haddii aad xiisaynayso birahaan, ha moogaan maqaalkan. Waxaan sharxi doonaa waxa ay tahay, meesha laga helo, waxa loo isticmaalo iyo sababta qiimaheedu uga sarreeyo kan dahabka, oo ay ku jiraan qiyamka ugu sarreeya ee ugu sarreeya ee uu gaaray palladium.
1 Waa maxay palladium?
1.1 Halkee laga helaa palladium dabeecadda?
2 Waa maxay isticmaalka palladium?
2.1 Fusion qabow
3 Dahabka vs. Palladium: Maxaa ka qaalisan?
3.1 Horumarinta Palladium
Markaan ka hadlayno palladium waxaan tixraacaynaa curiye kiimiko ah oo lambarka atomkiisu yahay 46. Tani waxay ka dhigan tahay inay wadar ahaan ku leedahay 46 proton gudaha nukleuskeeda iyo 46 kale oo electron ah oo ku wareegsan. Maaddaama tirada protons -ka iyo elektaroonka ay isku mid yihiin, xaddiga qiimaha togan iyo tabanba waa is le'eg yahay, taasoo dhalisa atam leh koronto guud oo dhexdhexaad ah. Si aan u helno palladium miiska xilliyeedka, waa inaan raadinnaa astaanta Pd. Curiye kiimikaadkan waxaa iska leh kooxda platinum kaas oo wadar ahaan ka kooban lix birood oo leh sifooyin kiimiko oo aad isugu eg.
Tan iyo wakhtiyadii hore, palladium waxaa loo tixgeliyey biraha qaaliga ah sababtoo ah midabka lacagta iyo yaraanta. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxa runtii siiya qiimaheeda waa astaamihiisa halkii ay ka ahaan lahayd muuqaalkiisa:
Ma daxalado marka ay taabato hawada.
Waa malleable oo jilicsan.
Kooxda platinum -ka, waa birta ugu cufan yar oo barta dhalaaliddu ka hooseyso kuwa kale.
Wuxuu nuugi karaa H2 (hydrogen molecular) oo aad u tiro badan.
Waa si hufan sababta oo ah awoodeeda ay ku nuugto H2 Palladium waxaa inta badan loo adeegsadaa kiciyeyaasha baabuurta, maadaama ay awood u leedahay in ay nuugto ilaa in ka badan oo aan ka yarayn 900 jeer muggeeda.
Halkee laga helaa palladium dabeecadda?
Sidaan hore u soo sheegnay, palladium waa cunsur dhif ah. Dabeecadda waxaa badanaa laga helaa qaab biraha ka samaysan biro kale oo ka tirsan isla kooxda, tii platinum. Kuwaas waxaa ka mid ah rhodium ama ruthenium, platinum lafteeda, iyo sidoo kale dahab lagu dahaadhay. Si kastaba ha ahaatee, Dhibaatada ugu weyni waxay tahay inay lagama maarmaan tahay in la farsameeyo xaddi badan oo macdan ah si loo helo xitaa qaddar yar oo palladium ah. Dhibaatadan helitaankeeda ayaa sii kordhisa qiimaheeda.
Sida kaydka ugu badan, kuwan waxaa laga helaa Buuraha Ural. Sababtaa awgeed la yaab ma leh taas Ruushku wuxuu soo saaraa qiyaastii 50% dhammaan palladium oo ka jira suuqa adduunka. 50% soo haray waxaa loo qaybiyaa miinooyinka wadamo kale: Australia, Canada, Mareykanka, Ethiopia iyo South Africa.
Waxa kale oo jira hab kale oo looga helo palladium qashinka shidaalka nukliyeerka. Tani waxay u baahan tahay adeegsiga falceliyayaasha fission nuclear. Si kastaba ha ahaatee, hawshani waxay ku lug leedahay shucaac aad u sarreeya, markaa lama isticmaalo.
Waa maxay isticmaalka palladium?
Palladium wuxuu leeyahay dhowr dalab oo muhiim ah kuwaas oo kaalintiisu ku leedahay dunida baabuurta. Soo -saarayaasha baabuurta ayaa birahaan ku dahaadhay mesh dhoobada ah ee kaaliyayaasha. Beddelayaashan kiciyeyaasha ah waxaa laga helaa baabuurta naaftada iyo baasiinka. Waad ku mahadsan tahay palladium iyo biraha kale ee ka tirsan kooxda platinum, baabuurtu waxay soo saaraan sunta sunta yar, maadaama ay u beddelaan kaarboon laba ogsaydh iyo uumiga biyaha.
Palladium sidoo kale waa biraha aadka loo qiimeeyo ee elektarooniga macaamiisha sababtuna tahay badnaanteeda. Kuwani waa codsiyadeeda qaybtan:
Daawaha leh lacag: Waxay ku lug leedahay isku -darka electrodes -ka capacitors -ka laga helo aalado badan oo koronto ah oo aan maalin walba isticmaalno, sida boodhadhka hooyada ee telefishannada, kombiyuutarrada iyo qalabka dhawaaqa.
Nickel Daawaha: Waxaa loo adeegsadaa dahaadhka meelahaas oo qaybaha korontadu soo gaarto.
Intaa waxaa dheer, palladium ayaa loo isticmaalaa on looxyada alxanka, gaar ahaan kuwa loo isticmaalo dahabka si ay u waaraan oo u adkaystaan. Codsiyada kale ee cunsurkani leeyahay ayaa ah beddelka dahabka cad iyo geedka, sawir qaadista si loo fududeeyo horumarinta filimada iyo berrinka elektiroonigga iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda cajiibka ah ee nuugista hydrogen -ka tiro aad u badan.
Waxa xiiso leh, saynisyahanno badan ayaa u jeestay palladium si ay u muujiyaan inay jirto suurtagalnimada abuuritaanka isku -dhafka qabow. Laakiin waa maxay kani? Waa farsamo ujeeddadiisu tahay dib -u -abuuraan il laga helo tamar aad u tiro badan iyada oo la isku darayo nukleerka atomiga iyada oo la raacayo xaaladaha cadaadiska iyo heerkulka labadaba la mid ah deegaanka caadiga ah. Waqtigan xaadirka ah, hawl -wadeennada isku -dhafka nukliyeerka ee saynisyahannadu tijaabinayaan waxay u baahan yihiin plasma -ka loo isticmaalo inuu gaaro heerkul gaaraya 200 milyan oo digrii. Waa sida kaliya ee lagu heli karo tamar aad u badan.
Sida iska cad waa caqabad in la xakameeyo plasma heerkulkaas, ma aha in la xuso dhammaan tamarta ay tahay in la maalgeliyo si aad loogu kululeeyo. Tani waa waxa ay saynisyahannadu rabaan inay ka fogaadaan isku -dhafka qabow. Doorka palladium ee farsamadan ayaa ah mid aasaasi ah maxaa yeelay awoodda ay u leedahay in ay nuugto hydrogen aad u badan heerkulka qolka ayaa sababi karta, xaaladaha ku habboon, isdhexgalka nukliyeerka oo ku filan in tamarta la sii daayo, aragti ahaan.
In kasta oo ay jireen kiisas ay saynisyahannada qaarkood ku andacoodeen inay ku guuleysteen inay dib u abuuraan isku -darka qabow, iyagoo adeegsanaya palladium, haddana tijaabooyinkan dib uma abuuri karaan kooxo kale oo cilmi -baaris ah. Dhinacani waa u muhiim iyaga in loo tixgeliyo inay ansax yihiin. Si kastaba ha ahaatee, cilmi -baaristu weli way socotaa waxaana laga yaabaa in xoogaa guul ah la gaadho sannadaha soo socda.
Dahabka vs. Palladium: Maxaa ka qaalisan?
Hadda oo aan ognahay in palladium uu ku jiro gacanta dalal yar, in uu ku yar yahay, waxa loogu talagalay iyo in farsameyntiisu aad qaali u tahay, ma adka in la fahmo sababta ay birta qaaliga ah u tahay. Dhamaadka, sahaydu waa yar tahay halka baahidu aad u badan tahay, taasina waxay u tarjumaysaa suuqa qiimo aad u sarreeya.
Waxay ahayd bilowgii Janaayo 2019 in palladium ay u suurtagashay inuu ka sarreeyo dahabka qiimaha. Tani ma dhicin tan iyo 2002, markaa waa wax lala yaabo. Laakiin sababta ay dahabka uga fiicnayd? Waa mid aad u fudud: Adduunku wuxuu si aad ah diiradda u saarayaa yaraynta heerarka wasakhaynta, gaar ahaan baabuurta.
Palladium waa bir aasaas u ah hawshan. Gawaarida baabuurta ma xisaabiyaan wax ka badan oo aan ka yarayn 80% isticmaalka palladium. Tallaabooyinka ay qaadeen dawlado badan, gaar ahaan kuwa Shiinaha, ayaa la adkeeyay xeerarka wasakhaynta baabuurta. Sidaa darteed, kuwa baabuurta sameeya waxaa lagu qasbay inay isticmaalaan palladium badan marka la soo saaro baabuurta. Waxaa lagu qiyaasaa in qiyaastii 85% birahaan loogu talagalay nidaamyada qiiqa baabuurta. Halkaas, doorka palladium waa inuu gacan ka geysto sidii wasakhda sunta ah loogu beddeli lahaa uumiga biyaha iyo kaarboon laba ogsaydh.
Markii palladium uu bilaabay inuu cirka isku shareero oo dahabka dhaafo 2019, qiimihiisu wuxuu labanlaabmay bilo gudahood. Bilowgii sanadka, bishii Janaayo 2019, sicirka suuqa ee birahaani wuxuu gaaray ugu badnaan 1389,25 doolarka Mareykanka ah. Sannad ka dib, bishii Febraayo 2020, qiimihiisu wuu labanlaabay, isagoo gaadhay ugu badnaan $ 2884,04. Sidii aan horeba u soo sheegnay, kororkan arxan darrada ah ayaa isku beegmay, ama halkii uu ka dhashay go'aanka dawladuhu ku adkeeyeen xeerka wasakhaynta ee ay sababaan baabuurtu.
Bilihii xigay qiimihii ayaa mar kale hoos u yara dhacay, laakiin sidaas oo ay tahay waxay calaamadisay meel kale oo sare markii ay qiimihiisu ahaa 3014,13 doolarka Maraykanka dhawaan, bishii Abriil ee sannadka 2021. Ilaa maanta, waxaynu ku jirnaa bishii Agoosto ee sannadkan, qiimihiisu qiyaastii 2600 ilaa 2700 doolar, dahab ku garaacday kun doolar, kuwaas oo isbedbeddelkoodii bilihii la soo dhaafay aad uga yaraa marka la barbardhigo. In kasta oo celcelis ahaan labadii sano ee ugu dambeysay ee palladium ay u dhigantaa $ 2067,87, dahabka waa $ 1669,02, farqi aad u weyn.
Laakiin ma tahay fikrad wanaagsan in la maalgaliyo palladium? Yaa og. Waxaa laga yaabaa inay tahay fikrad wanaagsan iyadoo la tixgelinayo baahida weyn ee loo qabo maaddadan iyo cidhiidhkeeda oo ay adag tahay in la helo. Sifooyinkaasi isma beddeli doonaan mustaqbalka dhow. Hase yeeshee, waxay hore u gaadhay qiimo aad u sarreeya, markaa waxa laga yaabaa inaan seegnay tareenkan. Ugu dambayntii, ma suurtowdo in la saadaaliyo waxa dhici doona iyadoo la hubo. Hadda oo aan si fiican u fahannay qiimaha palladium, way noo sahlanaan doontaa inaan go'aansanno haddii aan rabno inaan maalgelinno arrintan ama haddii aan si wanaagsan u oggolaanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Palladium: Ka qiimo badan dahabka
Xigashooyinka Ben Bernanke